I-Mapserver isebenze njani - i-Geofumed
Ngo-Okthobha, 2010 Iiphotography
ixesha lokugqibela sathetha ngayo kutheni ezinye iikhrayitheriya MapServer kunye neziseko zofakelo. Ngoku makhe sibone ukusebenza kwayo kwindlela yokusebenza kunye neemaphu zeCuapaneco.
Apho iphakanyisiwe khona
Emva kokuba i-Apache efakwe, isixhobo sokushicilela esingagqibekanga seMapServer yifolda OSGeo4W ngqo kwi C: /
Ngaphakathi, kukho iifolda ezahlukileyo kunye nezicelo kuxhomekeke kwinto efakweyo, kodwa ifolda yokupapashwa kufuneka ihambe ngaphakathi kwe-Apache. Kule meko ifolda ebizwa ngokuthi gis.
Emva koko ngaphakathi, ifolda yedata iqulethe iibonda, i-orthophoto, njl
Kwifolda njl., Kukho iifom zolu hlobo olusetyenziselwa iilebula, kunye nokwandiswa .ttf. Kwakhona iifayile ye-txt ephakamisa yona enye enye ichaza iimpawu.
Kwaye ekugqibeleni kwifolda ye-httdocs iya kumaphepha ewebhu aphakamisa inkonzo.
Kulo mzekelo, ndiza kusebenzisa ityala eliboniswe kwangaphambili. Eyona nto iqulethe ifayile yenkcazo ebuyisela enye yokongezwa kwe-phtml, kwaye ngoku kuphakamisa imisebenzi eyakhiwe kwi-php kunye neemephu. Ifolda iqulethe imifanekiso edibeneyo ukusuka kwiphepha.
Ukuba sibukeka, i-phtml kuphela ikhebhile eyakhiwe ukusuka kwiibhulawu, kwaye ibizwa ngemisebenzi yamamephu / php. Ufanele uvuke usebenzisa:
Isiphumo siboniswe ngezantsi:
ukuya kumbindi umsebenzi GMapDrawMap (),
ngakwesokudla umnxeba GMapDrawKeyMap keymap (),
ibha yesikali ngaphantsi GMapDrawScaleBar (),
kwaye xa kwenzeka imisebenzi yokuthunyelwa, imeko ephathelele uluhlu lwebhokisi ukuba (! IsHtmlMode ()) echo "<! -" ngezigqibo: ZOOM_IN, ZOOM_OUT, RECENTER, QUERY_POINT.
Sekuvele isebenza, isibonakaliso sifana nale:
Ukudibaniswa kwephepha leMapserver kukuthi yiyiphi i-Apache ephakamisayo, eyathumela php maphepha kwaye emva koko igobolondo. Kodwa ininzi yesayensi iifayile ze .map, ezingafanelanga ukudideka kunye nezo zenziwe yi-Mapinfo, i-Manifold okanye i-Mobile Mapper Office eneenkcukacha ezifanayo.
Ezi .map ziifayile zetekisi, eziqule imephu ngendlela yeskripthi. Ezi zinokudalwa ngeeprodeskthi ezifana ne-Quantum GIS, ukuba zisetyenzisiwe enye enye imephu ephambili, enye ye-Keymap kunye neyesibini ze-OGC iinkonzo ze-wms kunye ne-wfs. Makhe sibone indlela i-mapscript isebenza ngayo:
I604299 1933386 610503 1939300 I-XNUMX # IMIBUZO YONKE IPHEPHA LEPALENQUE
#EXTENT 605786 1935102 608000 1938800 #SOLO I-01 SECTOR
I-MAP ibonisa ukuba uqala iskripthi
I-STATUS, ibonisa ukuba imephu engagqibekanga ikhona okanye ayikho
SIZE ubukhulu bomboniso
I-SYMBOLSET ibonisa indlela yeempawu
I-EXTENT idibaniseli yesibonakaliso. Isimboli # se tyenziswe ukwenza izichasiselo
SHAPEPATH, indlela apho iziqendu zikhona
Zonke ekupheleni ziya kugqitywa ngomyalelo we-END
Ngaphakathi, ikhowudi iqala ngomgca womyalelo, kwaye iphelela ngo-END, umzekelo kumgangatho osisiseko kunye nesisigxina; lwemifanekiso yeemifanekiso zesikhashana:
I-COLOR 0 0 0
I-COLOR 255 255 255
I-BACKGROUNCOLOR 0 0 0
Uluhlu lwe-raster: oluya kwingxowa-mali, ngokuchazwa kwoluhlu olufana ne "Ortofoto", ukusuka kwi-tiff ekhompyutheni yedatha:
INGXELO "C: \_ OSGeo4W / apps / gis / data / ortofotoGral.tif"
Umgca we-shp wee-polygons, ezixhomekeke kwimilinganiselo, ukuphakamisa idatha ethile kwi-template ye-html, ne-label ye-sans font, ubukhulu be6, umbala omnyama kunye nomgca omhlophe we-5 buffer ...
I607852 1935706 610804 1938807 METADATA
"INKCAZELO" "I-Thematic by Value Sector 02"
"RESULT_FIELDS" "UNkskink Cve_Mz Cve_Pred Indawo yePerimeter VALUE"
I-COLOR 128 128 128
UKUPHUMA ([VALUE] = 0)
END # # value 0
I-COLOR 255 128 128
#COLOR -1 -1 -1 #SIN UKUFALISA
... kwaye njalo kuze kube sekupheleni
END # # Value Value
IPHEPHA # Uluhlu
Ngenxa yoko, ukusebenza kunye MapServer, nangona ilula, kuba iindlela ezintsonkothileyo encinane kakhulu imisebenzi emikhulu kuba yonke into kwi .map. Esi sithintelo inkulu kukuba yonke yenziwe ngeenyawo, ezifana ukuchaza umbala nganye theming, ngoko ke kuvela izixhobo ezifana CartoWeb, ukusebenza MapServer kodwa izisa plugins yakhiwe nemizekelo kunye neempawu ezenza le nguqulelo zakudala baqhubeke i ukufunda kuqala:
Umsebenzi ohlukeneyo, kunye ne-AJAX ukuze uhlaziywe ngokwahlukileyo
Phakamisa ikhowudi, ngaphandle kokuba i-script iphinde ibhale kwakhona .map ngokubhekiselele kwiimpawu ezikhethiweyo
Ukubuya ngokukhawuleza ngaphandle kokufuna ukuhlaziywa, njengokungathi kuluhlu lwesaqa
Ukulungiswa kwe vector kwi-intanethi, ukubhalwa kwangoko kwi-cache
Uluhlu lokulayisha kwifom ye vector
Thumela kwiGoogle Earth
Qalisa iPaul of the deployment
Ngomnye siza kujonga iCartoWeb, apha ndiyishiye ikhonkco kwimimiselo ephambili.
Post edlulileyo«Edlulileyo Alibre, okuhle 3D kuyilo mechanical
Post Next Geofumed kwiifoto eziphantseOkulandelayo "
Iimpendulo ze-3 "Indlela iMapserver isebenza ngayo"
UJuan Muñoz uthi:
Kukho indlela yokuba ne-standard httml template iphume, siyabonga
Ndizama ukubiza umgca ukusuka kwi .map, ngale ndlela:
Izindlu zokuhlola zegama
Ingxaki yam kukuba inkonzo ye-DSN inika iingxaki: xa ndicela i-GetCapability ukuba ndibuyisele i-password ... ndinga faka umnxeba kwifayile ukunqanda "ukunika" ipassword okanye yimpazamo ye-DSN? Enkosi!
umva wemephu uthi:
I-MapServer yiprojekthi evulekileyo ye-Open Source enenjongo yokubonisa iimophu ezinamandla zendawo kwi-intanethi. Umqhubi oqhubekileyo ngumqhubi odweliswe kwifolda engenanto kwivolumu esebenzisa inkqubo yefayile ye-NTFS. Umsebenzi oqhubekileyo oqhuba njengamanye aqhubayo, kodwa anikwe iindlela zokuqhuba endaweni yokubhala iileta.